Solitaire 1.5.2.125 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.5.2.125 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Brainium အားဖြင့် Solitaire အခမဲ့ရရှိနိုင် Android နဲ့ Google Play တွင်ထိပ်ဆုံးဂန္ solitaire ကဒ်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျဂန္ solitaire ကြိုက်နှစ်သက်လျှင်, သင် Brainium အားဖြင့် Solitaire ကိုချစ်တာပေါ့!
ကျနော်တို့ (စ Klondike သို့မဟုတ်စိတျရှညျအဖြစ်လူသိများ) ကိုဂန္ကဒ်ဂိမ်း၏ဝိညာဉ်ကိုမှစစ်မှန်တဲ့ solitaire စောင့်ရှောက်လျှင်, ချွန်ထက်နှင့်သန့်ရှင်းသောပုံရိပ်ယောင်များနှင့်အတူတစ်ဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်း app ကိုလက်ရာမြောက်စွာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ပွိုတိုက်ပိတ်အတွေ့အကြုံ, ရှိသမျှမျက်နှာပြင်အရွယ်အစား၏အန်းဒရွိုက်ဖုန်းများနှင့် tablet များအတွက်ဂိမ်း optimized ။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိ, သင်လည်းသင့်ရဲ့ Solitare ဂိမ်း၏ကြယ်ပွင့်ဖြစ်လာကြပြီးထုံးစံနောက်ခံနဲ့ကဒ်များကုန်းပတ်ကိုဖန်တီးရန်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဓါတ်ပုံရွေးနိုင်သည်။
သငျသညျ Solitaire Classic, ပင့်ကူ Solitaire, FreeCell Solitaire, Mahjong, ပိရမစ် Solitaire သို့မဟုတ်အခြားအခမဲ့ solitaire သည်းခံခြင်းကဒ်ဂိမ်းများကိုချစ်ကြလျှင်, သင့်ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များအတွက်အကောင်းဆုံး solitaire အပေါ်ထွက်လက်လွတ်မကြဘူး! ကိုယ့်ဂိမ်းတစ်ခုပါအပ်သဖြင့်, ကျနော်တို့ Brainium အားဖြင့် Solitaire သငျသညျအစဉျအမွဲကစားပြီးပြီကိုအများဆုံးအသုံးပြုသူဖော်ရွေ solitaire ဂိမ်းဖြစ်လိမ့်မည်ကတိပေး။
♥︎ Klondike solitaire 1 ဆွဲ &3Modes သာဆွဲ
♥︎ Solitaire ဂန္နှင့်ဂတ်စ် solitaire အမှတ်ပေး
♥︎သင့်ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံများနှင့်အတူ solitaire ၏အသွင်အပြင်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်
♥︎ Solitaire လက်ဝဲလက်ကစားထောက်ခံပါသည်
သင်တို့သည်ငါတို့၏ Solitaire app ကိုပျော်မွေ့ခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏သည်အခြားကဒ်ဂိမ်းများနှင့်အခမဲ့ solitaire ဂိမ်းများကိုထုတ်စစ်ဆေး: ပင့်ကူ Solitaire, FreeCell Solitaire နှင့် Sudoku ကို Google Play စပေါ်မှာ။
Solitare အခမဲ့နှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့မေးခွန်းများကိုနှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ကြယ်ငါးပွင်ထောက်ခံမှုကိုဆက်သွယ်ပါ:
bluepandastore စတိုး 33 81.13k
APK ဗားရွင္း 1.5.2.125
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.brainiumstudios.com/privacy
Release date: 2019-07-12 07:43:17
လက်မှတ် SHA1: FF:EB:DA:0D:A4:88:94:6F:D8:F2:C2:AB:A5:31:7B:23:16:45:D3:D0
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Brainium Studios
အဖွဲ့အစည်း (O): Brainium Studios
နယ်မြေ (L): Portland